सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल Class9Nepali प्रश्नोत्तर | Solutions | Khullakitab
Class9Nepali Solution
Nepal sarkhar sikshya mantralya sanothimi bhaktpur
सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल
मानव बेचविखन विरुदध हाम्रो दायित्य
मङ्गलाका तिन दिन
सय रङ इन्द्रेनी
१) प्रस्तुत जिवनीको दास्रो र पाचौँ अनुच्छेद शिक्षक वा कक्षाको कुनै एक विदे्यार्थीले वाचन गरेको सुनेर ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस ।
क) रामशरण नेपाली सेनाको ब्यान्डका नाइके थिए ।
ख) रामशरणका पिता कामको खोजीमा विदेश गए ।
ग) रामशरणका पिता दबार हाइस्कुलमा पढ्दै थिए ।
घ) रामशरणको मामाघर थली र गोकर्ण थियो ।
ङ) रामशरणले प्रवेशिका परीक्षा मात्रै उत्तीर्ण गर्न पाएका थिए ।
२) तलको पाठ सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस् ।
क) कालुसिंह रनपहेलीको हुन् ?
कालुसिंह रनपहेली भारतीय नेपाली साहित्यकार हुन् ।
ख) उनलाई किन भारतीय नेपाली भनिएको हो ?
आमाबाबु रोजगारीका लागि भारतमा बसोबास गर्दा जन्म भएको र उनी त्यहीँको बासिन्दा समेत भएकाले उनलाई भारतीय नेपाली भनिएको हो ।
ग) उनका पितापुर्खा किन भारत पसेका थिए ।
उत्तरः राजगारीको सिलसिलामा भारत पसेका थिए ।
घ) उनको मुल परिचय के हो
उत्तरः पत्रकार, साहित्यकार नै उनको मुल परिचय हो ।
ङ) उनी साहित्यका कुन कुन विधामा चिनिएका छन् ?
उनी साहित्यका कथा र कवितामा चिनिएका छन् ।
१) तलका शब्दहरु ठिकसँग उच्चारण गर्नुहोस् र उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी लेख्नुहोस,
आर्थिक/ आर्. थिक्
२) ओपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको मानिस पनि विद्धान् बन्न सक्छ भन्ने विषयमा आफ्ना साथीहरुका बिचमा छलफल गर्नुहोस् । त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नहोस् ।
समयको घेरामा बाँधिएर हासिल गरेको शिक्षाबाट मुस्किलले केही व्यक्तिहरु विद्धान् भए पनि मुल रुपमा अनौपचारिक शिक्षाबाटै मानिस विद्धान् बन्न सक्छ । कि पढेर जानिन्छ कि परेर जानिन्छ भन्न् कथन नेपाली समाजमा प्रचलित रह्ेको छ । हाम्रो मुल मान्यता औपचारिक शिक्षाबाटै विद्धान् हुन सकिन्छ भन्ने छ । धेरै मानिसहरु औपचारिक शिक्षाबाटै विद्धान भएका पनि होलानन् । तर औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको मानिस पनि विद्धान बन्न सक्छ । यसको उाहरणका रुपमा हामी स्व. स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई लिन सक्छौँ उनले औपचारिक रुपमा शिक्षा हासिल गरेको देखिँदैन तर उनी नेपालमा निकै उच्च कोटीका विद्धान्का रुपमा चिनिन्छन ।
अनैपचारिक शिक्षा हासिल गर्न समयको पावन्दीले मासिलाई कहिल्यै कज्याएर राख्दैन । स्वतन्त्रतापूर्वक उसले आफ्नो रुचि अनुसार ज्ञान हासिल गर्छ । यसरी हासिल गरेको अनौपचारिक शिक्षाबाट उसको दृष्टिकोणको दायर फराकिलो हुन सक्छ र उसले समाज, राष्ट्र« र विश्वलाई नै मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ । त्यसैले विद्धान् हुन औपचारिक शिक्षामा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने छैन । अतः अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरे पनि मानिस सजिलै विद्धान् बन्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
३) घरको आर्थिक अभावले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको विषयलाई लिएर कक्षाका दुई जना साथी मिली अभिनय सहित कक्षामा कुराकानी गर्नुहोस् ।
उत्तर (शिक्षकको निर्देशनमा विद्याथीले तलको संवाद कक्षामा प्रस्तुत गर्न )
राम: (टाउकामा हात राख्दै) खै, सिता म त अब पढ्न पाउँला जस्तो छैन ।
सिता: हैन, यो तिमी के भन्दै छौ राम तिमी ?
राम: हो साथी, साँचो कुरा भनिरहेकी भनिरहेकी छु ।
सिता: कुरा के हो स्पष्ट भन न ।
राम: खै के भन्ने ...........................?
सिता: हँ, कतै आर्थिक अवस्थाका कारण तिमीलाई तिम्रा बुबाआमाले विद्यालय नपठाउन खोजेका छन । होइनन् ?
राम: हो , सिता, कुरा त्यही हो । मेरा बुबाआमा रातको दिन कृषि क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिनुहुन्छ । त्यती धेरै मेहनेत गरेर फलाएको अन्न साहुलाई बुझाउदैमा ठिक्क हुन्छ । घरमा अरु केही आम्दानीको स्रोत छैन । त्यसैले हामी अब तिमीलाई पढाउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरुले भन्नु भएको छ । बुझ्यौ ?
सिता: ए, समस्या त्यस्तो पो हो । तिमीले त्यस्तो आर्थिक अभावले पढ्न नपाउने नै भयौ । मलाई साह्रै दुःख लाग्यो ।
राम: के गर्नु बुबा आमाको समस्यालाई पनि त बुझ्नै प¥यो नि होइन ?
सिता : यस्ता समस्या त धेरै हुन्छ समस्या प¥यो भनेर आत्तिनु हुदैन सँघर्ष गरेर भए पनि पढ्न छोढ्नु हुदैन । हामीले सहयोग गर्न ठाउँमा सहयोग गर्छौ ।
राम: हुन्छ म पढ्न छाढ्दिन काम गरेर भए पनि पढ्छु ।
४) तपाईँका वरिपरि उपलब्ध हुने बाजाका विषयमा केही बुँदा तयार गर्नुहोस् र त्यसकै आधारमा कक्षामा प्रस्तुति गनुहोस् ।
मेरो वरिपरि मादल, सनाई, नरसिङ्गा, बिनायो आदि पाइन्छन् । यिनका बा्मा तल बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ:
क) मादल – काठको ग्वाङ्ग्रोबाट वन्ने छालाले तन्काएर छेउमा खरीको लेप राखिने, अनेक लोक धुनहरु निकाल्न सकिने नेपालको अति नै लोकप्रिय बाजा हो ।
सनाई – मुखले फुकेर बजाईने, यसको संरचनामा तिन भाग हुने सबभन्दा मथिल्लो टुप्पाको भाग तारिकाको पातले बनेको र ध्वनिको मुख्य केन्द्र पनि यही हुने, दोस्रो भाग शरीरमा ७ वा ८ ओटा प्वाल पारिएको काठको ढुङ्ग्रो वा नली आकारको हुने , औँला सञ्चालन गरि बजाइने, अन्तिम भाग धातुले बन्ने, पञ्चैबाजा पर्ने यसको आवज निकै तिखो हुने ।
ग) नरसिङ्गा – परापुर्वकालदेखि बजाइने तामाको अर्धचन्द्राकार मुखदेखि फुक्दै गएको नेपाली प्रसिद्ध बाजा, धातुले बन्न्े पञ्चबाजाभित्र पर्ने एक पौराणिक वाद्य हो ।
घ) बिनायो – झ्वाट्ट हेर्दा हर्माेनियमको रिड जस्तै हुने प्राय: १ वा २ चौडाइदेखि ६ इन्चसम्मको चेप्टो बासको बिचका् भाग दुईपट्टि जिभ्रो जस्तो पारेर चिरिएको, ओठले च्यापेर बजाइने, एकापट्टि डोरीले बाँधिने, त्यही झडकार्दा मधुर आवाज आउने ।
१) तेस्रो अनुच्छेदलाई दु्रत वाचन गनुैहोस् र ‘सो अनुच्छेद पढ्न तपाईलाई कति समय लाग्यो, त्यसको हेक्का राख्नुहोस् ।
२) गति र यति ध्यान दिई पाठको अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहोस् ।
३) तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रशनहरुको उत्तर दिनुहोस्:
क ) कस्तो आले बार वर्षको कुरा भिन्नै हुन्छ ?
उत्तर सङ्घर्षैैै र अभाव बिच बितेको बार वर्षको कुरा भिन्नै हुन्छ ।
ख) समयकाृ प्रवाहमा मानिस कसरी हेलिन्छ ?
उत्तर समयको परिवर्तनले मानिस चाहेर वा नचाहेरै आशैआशाको मग्न गोरेटोमा हेलिन्छ ।
ग) प्रस्तुत अनुच्छेदमा नन्दलालको कस्तो अवस्थाको चित्रण छ ?
उत्तर प्रस्तुत अनुच्छेदमा नन्दलालको आर्थिक रुपले अत्यन्त दयानक अवस्थाको चित्रण छ ।
घ) नन्दलाल र पवनी किन रोइरहेका थिए ?
उत्तर बिरामी परेर सुतेका छोरालाई ओखती किन्ने पैसा नभएर नन्दलाल र पवनी रोइरहेका थिए ।
ङ) बिरामीका आँखा रसिला हुनुका दुई कारण के के हुन् ?
उत्तर बिरामीको आँखा रसिला हुनुको कारण आर्थिक अभाव र खानेकुराको समस्या हुनु हो ।
प्रस्तुत जिवनी पढी तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख्नुहोस्:
क) रामशरणका पिता किन विदेश गएका थिए ?
रामशरणका पिताको घर परिवारको आर्थिक अवस्था अति नै दयनीय भएका कारण आर्थिक अवस्था सुदूढ बनाउने हेतुले विदेश गएका थिए । निम्न वर्गीय दलित परिवारका सदस्य भएपनि नेपाली सेनाका नायिके थिए । उनलाई ‘हवल्दार मेजर’ भनेर चिन्थे । उनी जागिरे भए पनि घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर थियो । जागिर खाउन्जेल पनि परिवारको खर्च धान्न मुस्किल थियो । उनी नागिरकबाट निवृत्त भएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था झनै नाजुक र जर्जर बन्न पुग्यो । युक्त अवस्थाबाट ऋण पाउनका लागि कामको खोजीमा उनी विदेश गए ।
ख) उनको पुख्र्यौली पेसा के थियो ?
उत्तर पुख्र्यौली पेसा नै बाजा बझाउने भएकाले त्यसको पत्यक्ष प्रभाव रामशरणमा प¥यो । गाउँघर र सहर बजारका अतिरिक्त सेनामा पनि बाजा बजाएर जीविकोपार्जन गर्ने पेसालाई उनको पुर्खाले अंगालेको थियो । बाजा गाजा र सङ्गीतप्रति यस्तो असीम श्रद्धा र लगाबका कारण रामशरण पनि एक सफल सङ्गीतज्ञका रुपमा चिनिन पुगे ।
ग) रामशरणका लागि पठन पाठन किन स्वप्नसरि बन्न गयो ?
दलित परिवारमा जन्मिएका रामशरण तत्कालीन समयमा उनले समाजबाट अनेकैँ अपहेलना र तिरस्कार सहनुप¥यो । घरको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर थियो । जीविकोपार्जन गर्न नै उनका लागि चुनौतिका विषय बनेको थियो । विपन्नतामा बाल्यकाल गुजारेका कारण रामशरणले विद्यालयको शुल्क समेत तिर्न सकेको पाइँदैन । केही समय आफ्नो पेसा गरे पनि विद्यालयको शुल्क तिर्न प्रबन्ध उनले नमिलाएका होइनन् । उनको पेशा गरेर उनले धेरै समय धान्न सकेनन् । आर्थिक अभावका कारण पढाइबाट उनले हात धुनुप¥यो । आर्थिक अवस्था धान्न असम्भव भएपछि रामशरणका लागि पठन पाठन स्वप्नसरि बन्न गयो ।
घ) उनको रुचि अध्ययनमा कसरी जाग्यो ?
उत्तर बाबुबाजेको पेसा बाजागाजा बजाएर जीविकोपार्जन गर्न रहेकाले रामशरण पनि युक्त पेशा प्रति आर्कषित हुनु स्वाभाविक थियो । घरमा आफ्ना पिताले सङ्कलन गरेका पुस्तकले उनमा पढ्ने चाहना विस्तारै विस्तारै जाग्दै गएको थियो । घरमा धेरै पुस्तक नभए पनि उनको पढाइप्रति रुचि जगाउन ती पुस्तक पर्याप्त थिए । उक्त समयमा उनका पिताले जतन गरि राखेका चर्चित उपन्यासहरु उनी खुब ध्यान दिएर पढ्थे । यसका अतिरिक्त रामायण, महाभारत, गीता, चण्डी नस्त धार्मिक पुस्तकहरु पनि पढ्न पाउने अवसर उनलाई प्राप्त भएको थियो । पिताको सङ्कन् र तिनको पठनप्रतिको आकर्षण र अगाबकै कारण उनको रुचि अध्ययनमा जाग्यो ।
ङ) उनको स्वास्थ्य बालक कालमा कस्तो थियो ?
उत्तर घरपरिवारको सदस्यालाई समेत उनको स्वास्थ्यको प्रतिकुल प्रति खुबै पिरोलेको थियो । बारम्बार रोगले सताइ रहने हुनाले उनकी आमा सधैँ चिन्ता ग्रस्त हुन्थिन् । सानामा उनी रोगी थिए । हरेक समय उनलाई एउटा न एउटा रोगले सताइरहेका हुन्थ्यो । जन्मेको कही महिनामै नाकको डाँडीमा खटिरा आएर त्यसले सताउनसम्म सताएको थियो । त्यो खटिराले उनलाई जीवनको अन्तिम सास फेर्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो । उनलाई बाल्याकालमा जुकाले र आउँले सताउने गथ्र्याे ।
च) उनकी आमाको निधन कसरी भयो ?
वि.स १९९० भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको पुरानै घरमा बस्न रामशरणको परिवार बाध्य थियो । आर्थिक समस्या र खानेकुराले समेत समस्याको चोटमा परेको अवस्थामा घरलाई मर्मेत संभार गरेको थिएन । उनको लागि घर बनाउने कुरा सपना सरि भएको थियो भने आर्थिक अभावका कारण चर्किएको घरको मर्मत गर्न समेत उनले सकिरहेको थिएनन् । २०२५ सालको बडादसैँपछि परेको अविरल वर्षाले उनको चर्किएको घर गल्र्यामगुर्लम ढल्ल्यो । घर भत्कँदा चेपिएर उनकी आमाको निधन भयो । समयमै चर्किएको घर मर्मत गर्न नसक्दा सोही घरले चेपिएर उनकी आमाकी दुःखद निधन भएको हो ।
च) वि.सं २०२८ मा उनीमाथि कस्तो विपद् आइलाग्यो ?
आर्थिक समस्याको चोटहरु सहँदै जीवनगति प्रति स्घर्ष गर्दौ जीवनगति अघि बढेको छ । आर्थिक समस्याका कारण पढाई र समयमै चर्किएको घर मर्मत गर्न नसक्दा घर भत्किएर आमाको निधन भयो । समस्या नै समस्याको शोकमा परेका रामशरण वि.सं २०१८ बिना कसुर एकेडेमीको सेवाबाट अवकाश दिइयो । सानो तिनो जागिरबाट जेनतेन गुजारा गरिरहेका रामशरणको जागिर अचानक खोसिँदा उनलाई पर्नसम्म पिर प¥यो । उनको जीवनमा ठुलो समस्या र पिडा भई सघर्षमै बिताउनुप¥यो ।
ज) नेपाल एकेडेमीको जागिरले उनलाई कस्तो अवसर प्रदान ग¥यो ?
रामशरण सामान्या जागिरेको रुपमा एकेडेमीमा उनी कार्यरत थिए । उनले जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि भने उनको व्यापक सामाजिक जविनको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उनले एकेडेमीमा रहँदा देखाएको कार्य कुशलताकै प्रतिफलस्वरुप उनले जीवन उत्तराद्र्धतिर सफलता हासिल गरे । उनलाई विषय समिति सदस्य पनि बनाइयो । सांस्कृतिक संवर्धन समिति , नेपाल शास्त्रीय समाज, कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महा विद्यालय, लोकबाजा सङ्ग्रहालय, नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान, दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान , दलित बुद्धिजीवी प्रतिष्ठान, बिसे नगर्ची प्रतिष्ठान आदिका सल्लाहकार पनि उनलाई बनाइयो ।
झ) उनले के कारणले पेसा परिवर्तन गरे ?
उत्तर रामशरण आफ्नो लोकबाजा जोगाइ राख्ने र त्यसलाई पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पेसा गरेको पाइन्छ । आफ्ना लोकगीत र लोकबाजालाई बाचाई राख्न र नयाँ पुस्तामा हसतान्तरण गर्न उनले नेपालका पश्चिम भेगका अनकन्टार ठाउँमा गएर खोज अनुसन्धान गरे । आफ्ना लाकेगीत र लोकबाजालाई पछिल्लो पुस्ताका लागि जोगाएर राखिदिनुपर्न अमूल्या सम्पत्ति ठानेर अनेक दुःख गरे । नेपाली सङ्गीत र बाजालाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ भन्ने ठानेर भारत, थाइल्यान्ड, जापान जस्ता देशमा गई नयाँ प्रविधिका बारे ज्ञान हासिल गरे ।
ञ) युवा पुस्तामा स्गीततर्फको रुचि कसरी बढाउन सकिन्छ ?
उत्तर: लोकगीत र लोक बाजलाई आधुनिकीकरण गरी हाम्रा सङ्गीततर्फको रुचि बढाउन सकिन्छ । पाशचात्य सङ्गीततर्फ आकर्षित हुँदै गएको युवा पुस्तालाई हाम्रो सङ्गीततर्फ रुचि बढ्न विश्वासका साथ रामशरणले यस क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण कामहरु गरेको पाइन्छ ।
परम्परागत ढाँचामै अलमलिरहने हो भने नयाँ पुस्ताले नेपाली लोकगीत र लोक बाजालााई सहज रुपमा लिन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखी हाम्रा लोक बाजालाई सहज रुपमा लिन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखी हाम्रा लोकबाजालाई जोगाउन आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच रमाशरणले बनाए । हाम्रा युवा पुस्ताले हाम्रा आफ्नै ताल, राग र स्वर नबुझेर पश्चिम सङ्गीततर्फ आकर्षित भएको महसुस गरे । यस्ता नयाँ पुस्ताका युवालाई हाम्रो आफ्नै ताल राग र स्वरका बारेमा राम्ररी बुझाउन सके उनीहरुमा आफ्नै सङ्गीतको रुचि बढ्छ ।
३) पाठको आधारमा कम्तिमा दस ओटा विाशेषण शब्द राखी रामशरणका चारित्रिक विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर: सङ्गीत तथा साहित्यका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई विशिष्ट योगदान पु¥याने रामशरण अपमान र कुरीतिलाई उन्मूलन गर्न चाहन्थे । प्राज्ञिक कर्ममा समर्पित हुँदै असिमित सङ्र्घष गर्न कति पनि नहिचकिचाउने रामशरणमा यिनै विशेषताहरु भेट्न सकिन्छ । श्रमजीवी परिवारमा जन्मेका रामशरण कुशल सङ्गतिज्ञ थिए । उनले सङ्गीतको विकास र विस्तारमा ठुलो योगदान पु¥याएका थिए । जातीय अपमानहरु सहँदै नेपाली सङ्गीतको खोज अनुसधान गर्ने र त्यसलाई आधुनिकीकरण गरी युवा पुस्तामा समेत लोकप्रिय बनाउने काम उनले गरे ।
४) माथिको जीवनीबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? बँुदागत रुपमा लेख्नुहोस् ।
१) जीवनमा धेरै समस्याहरु आइपरे पनि धैर्य गरी अगाडि बढ्नुपर्ने
२) निरन्तरको मिहिनेतले अवश्या नै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
३) सामाजिक कुरीति उन्नति र प्रगतिका बाधक हुने भएकाले तिनको उन्मूलन गर्नुपर्न ।
४) सामाजिक कुरीतिले सामाजिक सद्भाव तथा एकता समेत खलबलिने हुनाले त्यस्ता कुराका पछि लाग्नु नहुने ।
५) हाम्रा युवा पुस्ताले हाम्रा आफ्नै ताल, राग र स्वर नबुझेर पाश्चात्य सङ्गीततर्फ आकर्षित भएको महसुस गरे । यस्ता नयाँ पुस्ताका युवालाई हाम्रो आफ्नै ताल राग र स्वरका बारेमा राम्ररी बुझाउन सके उनीहरुमा आफ्नै सङ्गीतको रुचि बढ्छ ।
५. व्याख्या गर्नुहोस्:
क) मादलको तालबिना बन्दुको नाल पनि फितलो हुन्छ ।
साङ्गीतिक परम्परामा मादलको तालको विशिष्ट स्थान रहेको छ । यसको ताल विना युद्धभूमिमा होमियका वीरयो्धाहरको रणकैशल पनि फिका बन्न सक्छ । त्यसैले नेपाली समाजमा मादलको तालको भूमिका र महत्तव उच्च रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
कलामा परिवर्तनको ठुलो सामथ्र्य हुन्छ । कतिपय मानिसहरु बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोलीमा शक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । तर बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोलीमा शक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । तर बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोलीमा शक्ति प्रदान गर्ने काम मादलको तालबाट निस्किने ध्वनिले गर्छ । त्यसबाट संवेदनाको भाव जागृत हुन्छ । बन्दुकको नाललाई समेत सशक्त बनाउन मादलको तालले विशिष्ट भूमिका खेलेका हुन्छ ।
नेपाली बाजामा अति नै लोकप्रिय मानिएको मादलको तालबाट निस्कने धुनले हरेकको मनलाई सजिलै आकर्षित गर्छे । नेपाली कला जगत्मा मादलको तालको महत्व र विशिष्टता उच्च रहेको मान्न सकिन्छ ।
ख) आखिर मृत्युका अगाडि जीवनको केही लागेन ।
उत्तर मानिसले जीवनमा मृत्युबाट बाँच्ने उपाय गरे पनि आखिरमा मृत्युका चपेटामा पर्नै पर्छ भन्ने प्रस्तुत गरिएकोे छ । जीवनको लागि मृत्यु एउटा प्राकृतिक परिघटना हो । यसको सत्यता र सार्वभौमिकतालाई जुनसुकै प्राणीले पनि स्विकार्नै पर्छ । यसकोे विश्वव्यापी अजेय प्रभावका कारण कसैले पनि यससँग चुनौती गर्न सक्दैन ।
सरल व्यवहारका धनी र सङ्घर्षका इतिहास रहेको रामशरण दर्नाललाई आर्थिक लगायत थुप्रै समस्याहरुले जीवनको पूर्वार्धमा सताएको थियो । उनलाई उत्तरार्धमा आएपछि पार्किन्सन जामको रोगले दुःख दियो । यसबाट बाँच्न उनले अनेक उपाय गरे । लडेर बेहोस अवस्थामा अस्पतालमा एघार दिनसम्म मृत्युसँग लडिरहे पनि आखिर उनका केही चलेन । लेखनाथ पौड्यालले भनेझैँ ‘‘आयो टप्प टिप्यो मिति टारेर टर्दैन त्यो’’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भयो । अजेय शक्ति मानिएका मृत्युका अगाडि कसैको जोरबल चल्दैन । उसले समय आएपछि हरेक प्राणीलाई आफ्नो चपेटामा पार्छ भन्ने शाश्वत सत्यलाई माथिको उद्धरणमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
ग) साँचो अर्थमा लेखक त्यही हो, जो प्रतिकूल परिस्थिति र कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो लेखनलाई निरन्तरता प्रधान गरिरहन्छ , आफ्नो साधनाबाट कहिल्यै विमुख हुँदैन ।
उत्तर: लेखकका जीवनमा अनेकौँ अनुकूल र प्रतिकूल परिस्थितिहरु आउन सक्छन् । खास गरी प्रतिकूल र कठिन अवस्थामा लेखक आफ्नो लेखकीय धर्मबाट विचलित हुन सक्छ । कुनै पनि लेखकले आफ्नो ब्रह्मले ठह¥याएको सत्यको उद्घाटन गर्नुपर्छ मौलिकता र साधना बिनाको लेखन शाश्वत र कालजयी बन्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो मौलिक परम्परा र युगीन परिवेशलाई ख्याल गरी लेखकले आफ्नो लेखकीय धर्मको परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उक्त उद्धरणमा बताइएको छ ।
जत्तिसुकै प्रतिकूल र कठिन परिस्थितिमा पनि लेखकले आफ्नो लेखकीय धर्मलाई ख्याल गरी साधनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जो प्रतिकूल र कठिन परिस्थितिबाट विचलित हुन्छ, त्यसले आफ्नो लेखकीय धर्मलाई निरन्तरता दिन सक्दैन ।
६) निम्न लिखित बुँदाका आधारमा ‘साहित्यकार सम’ शीर्षकमा एउटा जीवनी रचना गर्ननुहोस् ।
साहित्यकार बालकृष्ण सम
बालकृष्ण सम आधुनिक नेपाली साहित्यकारको जन्म वि. सं. १९५९ मा काठमाडौको ज्ञानेश्वरममा भएको थियो आमा कर्तिराज्य लक्ष्मी र बुबा समरसमसेरका सुपुत्र बालकृष्ण सम तत्कालीन राणाहरुको वैभवमशााली परिवारमा जन्मिएका हुनाले बाल्यकालमा कुनै दुःख भोग्नु परेन । नेपाली साहित्यका निकै चर्चित व्यक्तित्व मानिएका पुष्कर समसेर उनको दाजु निकै हट्टकट्टा थिए भने समको स्वास्थ्य सानोमा निकै कमजोर थियो । त्यसबेला बाबुआमाले आफूले भन्दा दाजुलाई बढी माया गर्दा उनलाई पीडा हुने गथ्र्याे ।
बालकृष्ण समको शिक्षारम्भ घरमै पं. तिलमाध देवकोटाद्धारा भएको हो । पछि उनले दरबार हाईस्कुलमा पढे र त्यहीँबाट म्याट्रिक उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि उनले त्रिचन्द्र कलेजमा आइ. एस्सी. सम्मको अध्यान गरेका हुन् । पढ्दा पढ्दै उनलाई सैनिक बन्नुपरेकाले उनको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना अपुरै रह्यो । स्वअध्ययनबाटै विशिष्ट ज्ञान हासिल गरेका समले पछि त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापन गर्ने काम पनि गरे ।
घरको वातावरणले बालकृष्ण सम नाटक लेखन र निर्देशन तथा अभिनयमा आकर्षित भए । घरमै रङ्मञ्च थियो । राणा दरबारमध्ये सबैभन्दा उच्चस्तरको रङ्गकञ्भ उनकै घरमा मात्र थियो । त्यहाँ सधैँ नाचगान र नाष्टक प्रदर्शन भइरहन्थे । यसले गर्दा उनको नाटकप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । दरबार स्कुल पढ्दा स्वदेशी बाहेक विदेशी साहित्यकारहरुका रचना पढ्ने अवसर उनले पाएका थिए । सोही क्रममा उनले विश्व प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी प्रसिद्ध साहित्यकार नाटककार विलियम सेक्सपियरका नाटकहरु पढे ।
बालकृष्ण समले विभिन्न प्रकृतिका नाटक लेख्नुका साथै आफैँ नाटकको अभिनय गर्न र नाटकको निर्देशन गर्ने काम समेत गरे । यिनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई रङ्गमञ्चको तालिम दिने काम पनि गरे । विभिन्न व्यक्तिहरुलाई तालिम दिँदा लाग्ने खर्च पनि आफैँ गर्थे । उनले नेपाली नाटकको लेखन, प्रदर्शन, विकास र विस्तारमा अमूल्य योगदान दिए । नेपाली नाटक विधालाई उच्च शिखरमा पु¥याउने क्रममा समको विशिष्ट योगदान रहेको कुरा उनले पु¥याएको योगदानबाट स्पष्ट हुन्छ ।
७) जीवनमा प्राप्त अवसरले मानिसलाई प्रगति मार्गमा डो¥याउँछ भन्ने कुरालाई रामशरण दर्नालको जीवनीका् आधारमा विवेचना गर्नुहोस् ।
रामशरण दर्नालमा कला एवम् सङ्गीतप्रति रुचि जाग्ने अवसर घरबाटै प्राप्त भएको देखिन्छ । पछि उनले एकेडेमीमा जागिर पाएपछि उनमा कला र सङ्गीत प्रति थप प्रेरणा मिल्दै गयोे । फलतः उनले प्रशस्त अवसर र सम्मान पनि प्राप्त गरे । फलस्वरुप उनले सङ्गीत सम्बन्धी लेख, पुस्तक, साहित्यिक कृति लेखे । त्यति मात्र होइन, नेपाली लोकगीत, लोकबाजाहरुको खोज तथा अधुनिकीकरण गर्न देश विदेश जाने गर्नुका साथै याुवाहरुलाई नेपाली सङ्गीतका ताल, राग र स्वरप्रति आकर्षित गर्न धेरै प्रयत्न पनि गरे । उनले गरेका प्रयत्नहरु धेरै सफल पनि भए ।
दलित परिवारमा जन्मिएका कारणले उनले धेरै अपमान र दुःख खपेका थिए । उनले भोगेका जातीय अपमानका कुरा आजका मानिसले त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्तैनौँ । स्थापित साहित्यकारसमेत कविताका आवरणमा उनीमाथि जातीय अपमान गर्न चुक्तैन थिए । उनी जातीय अपमान र भेदभावको यस कुरीतिलाई मिल्काउन चाहन्थे । जातिका आधारमा गरिने अमानवीय व्यवहार मानवता विरोधी कर्म हो भन्ने मान्यता उनको थियो । उनका पिता सत्यकुमार दलितले पशुपतिमा प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनका अभियन्त थिए । जीवनको उत्तरार्धतिर रामशरणले जातीय मुक्ति अभियानअन्तर्गत आफ्ना समुदायका मानिसहरुलाई सङ्गठित गर्ने काम गरेका थिए । यति भएर पनि उनको मूल ऊर्जा भने प्राज्ञिक कर्मतर्फ नै समर्पित भयो । उनले आफूलाई असीमित सङ्घर्षको कसीमा घोटिएको अकबरी सुनको रुपमा उभ्यान सफल भए । उनी आफ्ना कृतिगत योगदाका कारणले नेपालीका मन मस्तिष्कमा सदैव जीवित रहेका छन् ।
८) तलको सूचीमा भएका शब्दसँग वाक्यमा रेखाङ्कित शब्दको जोडा मिलाउनुहोस्:
क) उनी जागिरे जीवनबाट निवृत्त भएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था झन् जर्जर बन्न पुग्यो ।
उत्तर मुक्त क) उनी जागिरे जीवनबाट निवृत्त भएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था झन् जर्जर बन्न पुग्यो ।
ख) यस्तो विपन्नतामा बाल्यकाल गुजारेका रामशरणले विद्यालयको शुल्क समेत तिर्न सकेनन् ।
उत्तर गरिबी ख) यस्तो विपन्नतामा बाल्यकाल गुजारेका रामशरणले विद्यालयको शुल्क समेत तिर्न सकेनन् ।
घ) उनलाई बिना कसुर सो सेवाबाट अवकाश दिइयो ।
उत्तर छुट्टी घ) उनलाई बिना कसुर सो सेवाबाट अवकाश दिइयो ।
ङ) मादलको तालबिना बन्दुकको नाल पनि फितलो हुन्छ ।
उत्तर कमजोर ङ) मादलको तालबिना बन्दुकको नाल पनि फितलो हुन्छ ।
©Copyright 2014 - 2022 Khulla Kitab Edutech Pvt. Ltd.
Level * Class 8Class 9Class 10Grade 11Grade 12